Umbadlana igigabhaythi GA-990XA-UD3: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza
Ukuze abathengi abaningi ezingaba uthole amageyimu motherboards kusukela ephansi intengo ingxenye amadivayisi High-End kabani lingaphezulu ruble 15,000. Nokho, njengoba ochwepheshe izimpendulo zabo, iningi izimfuneko ibhodi uhlelo izohlala ezinganeni ngoba iningi abasebenzisi. Umnqopho we kwalesi sihloko, omelele ikilasi isabelomali - igigabhaythi umbadlana GA-990XA-UD3, okuyinto ezimbalwa kakhulu abathengi ngokuvamile unake. Ngemva ruble ayizigidi 8-9 agudlisela ngokucacile umsebenzisi kudivayisi ukusebenza ongaphakeme. Kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, isabelomali kanye nabamele bayakwazi kusimangaze zabanikazi.
Izici ebhodini uhlelo
Umbandela esiyinhloko ngokukhetha amakhasimende ngoba iningi ukusekelwa yibo bonke izilimi yesimanje. Ifomu isici AM3 + FX / AM3 Phenom II iyingxenyekazi zakamuva AMD, ngakho isekela yimuphi umkhiqizo omusha ku processor emakethe yomenzi. Uhlelo hybrid ATI CrossFireX futhi Nvidia SLI on a yesikhulumi olulodwa Ungomunye ngezici okubonwa ngazo yokufuna umbadlana. Futhi devaysa igigabhaythi GA-990XA-UD3, lo msebenzi ukusebenza hardware.
Ngokuvamile, izindleko motherboards overstates eyakhelwe raid isilawuli for eziyisithupha-isiteshi SATAIII esibonakalayo. Kodwa lapha igigabhaythi Abaklami wasukuma ukuze lesi senzakalo. Ngaphezu kwalokho, umbadlana is kuvikelwe kanye neminye imisebenzi ewusizo, lapho umfundi uyofunda lapho ufunda lesi sihloko.
Ukwazana kuqala nge umbadlana
ATX ledivayisi isici iza amakhadibhodi ibhokisi elikhulu. ekhombisa wayo bayafundisa anele umthengi: ngakolunye uhlangothi lwale iphakethe ezaziwakhile umbadlana ngokwayo, izici ubuchwepheshe etholakalayo zipendwe ohlangothini reverse ebhokisini. ephambanisa kuphela okubhaliwe asichazayo ukusebenza, kodwa i amateur. Phela, umuntu kwanele ukuze ubone isithombe esikhanyayo, kodwa abanye bakhetha incazelo egcwele.
amadivaysi Ukuthola futhi ephelele, abanikazi kuphawulwe kuzibuyekezo zabo, enhle. Ngaphezu umbadlana nedatha ye-plug ibhodi esibonakalayo ebhokisini umsebenzisi uzothola: ephelele yokufaka imiyalelo, i-CD ne abashayeli kanye Tinsita, olulodwa SLI ngebhuloho, futhi 4 Sata amakhebuli. Ngokwemvelo, khona esibonakalayo izintambo sabo bonke abanikazi kuyinto yinto emnandi kusuka umkhiqizi. Kuyaphawuleka ukuthi izintambo ezimbili une-isixhumi L emise kalula ukufakwa.
Ukubukeka and build izinga
Ngisho motherboards abiza kabili intengo kudivayisi okukhulunywa ngakho, ngakho-ke akuwona ababebuthene. Emazwini abo, abanikazi abaningi bathi izulu umbadlana libuthene ku Feng Shui:
Iningi amandla bafudumale izakhi zitholakala phakathi nezixhumi esibonakalayo kanye nezisekelo ngokuba processor. Basuke ahlelwe imigqa lihlale radiators simboziwe.
nezixhumi Yangaphakathi ukuze uthole iphaneli lokulawula kanye USB-port futhi ngobunono ibekwe ilandelana futhi ehlukile komunye nomunye Umbala.
Sata-nezixhumi asezindaweni block efanayo, futhi kalula uxhumano esibonakalayo ibekwe parallel ibhodi uhlelo (ngeke siphazamise yokudlala ihluzo ikhadi).
Okuwukuphela engalunganga, njalo udonsa amehlo abasebenzisi, - obeka pads uxhumano of Coolers ezengeziwe. umkhiqizi yabo, futhi, sibekwe elisoGwini emaphethelweni ebhodini. Abanikazi izakhiwo nge a lot of abalandeli kuyodingeka usebenzise 12 engama-volt angu zokunweba.
Dual BIOS uhlelo nge 32 MB Flash ROM, ukusebenza kule ubuchwepheshe ACPI, isiqinisekiso ukusebenza umbadlana zonke overclockers. Game kudivayisi izinga igigabhaythi GA-990XA-UD3 AM3 inikeza PCI Express Slots ezintathu. South Ibhuloho AMD SB950 yibhange ukusebenza ekwakheni raid 0, 1, 5, 10. umsindo aphendvule isilawuli Realtek ALC889, futhi Gigabit inethiwekhi luyasetshenziswa ku-chip Realtek RTL8111E. Zonke esekhulile, njengoba motherboards ezibizayo.
Ukwanda amakhono obuchwepheshe ukuhlangabezana ezimbili PCI isixhumi, elidingekayo Awukavimbi ukupholisa ikhadi uhlelo vidiyo. Likhona kwi umbadlana igigabhaythi GA-990XA-UD3 futhi PCI Express 2.0 x1, okuyinto kwaduma again sibonga ukuvela ultra-fast SSD ngemoto ngaphansi kwalesi esibonakalayo. Isixhumanisi buthakathaka lonke uhlelo - yiyona ibhuloho enyakatho. It lucwaningo ukwesekwa 4 inkumbulo DDR3 amamojuli ukusebenza e Douala, kodwa akukungakanani ivolumu RAM 16 GB.
CPU ukufakwa Izici
Namandla ipuleti esikhiphekayo ohlangothini ngemuva umbadlana igigabhaythi GA-990XA-UD3 has okubuyayo. Kodwa bonke abantu kakhulu udidekile khona capacitor iseduze ngezikulufo processor heatsink obandayo. Uma ufaka i-yokwenziwa Ukupholisa uhlelo, kuyacaca ukuthi ngendlela. Okuwukuphela kwendlela ukuwuhlanza - lokhu solder okufanayo, kodwa umoba eside (nje ukugoba ukuze ohlangothini).
Ukuze kuxazululwe le nkinga nge epholisayo kungaba ukuhlela usebenzisa noma ibaphi cooler emakethe. Kungokufanayo kwagcizelela ipuleti kurediyetha ihlinzeka kufanelekile Ukuthokomala kuze processor, futhi awukwazi ukhathazeke ukuthi uma ufaka iphawundi uhlelo Ukupholisa ngeke kulimaze umbadlana.
Sibutsetelo iphaneli esibonakalayo
Ibhajethi umbadlana le igigabhaythi GA-990XA-UD3 ifakwe ngokukhiphayo optical yokuxhuma kumadivayisi umsindo. Lena ukufohla ecacile emakethe amadivayisi ikhompyutha we ephansi intengo ingxenye. Ngaphezu kwalokho nomkhiqizi owethulwa ngemuva ibhodi nezixhumi ezimbili USB 3.0, kwesisodwa futhi emangala bonke abasebenzisi, ngoba AMD nale nkinga njalo. Leli thimba laphinde has:
6 USB 2.0 emachwebeni;
1 PS / 2 (noma igundane noma ikhibhodi);
1 IEEE 1394 esibonakalayo;
omunye Gigabit RJ-45 Imbobo;
nezimbobo eziyisithupha yokuxhuma izinhlelo umsindo.
Njengoba abasebenzisi izibuyekezo zabo, plus cabanga engathandwa isixhumi IEEE 1394 futhi sithambekele kulokhu kucabanga ukuthi port eSATA kwakuyoba lamukeleke kangcono ibhodi esibonakalayo. Ngokuvamile, njengoba amashadi, kakhulu kahle ezingemuva iphaneli izixhumi.
Izici eziyisisekelo okokufaka-okukhipha uhlelo
Akukacaci ukuthi yini inhloso isabelomali ukukopisha igigabhaythi GA-990XA-UD3 isekela Touch e BIOS uhlelo, kodwa, ngokubona abanikazi, lobu buchwepheshe imisebenzi kanye manipulator igundane ukuthi lula ukucushwa kwe yonke ikhompyutha. IO imenyu nesizotha futhi akanayo indawo yayo sokuqhafaza, futhi lokhu ephambanisa abasebenzisi eziningi. Kodwa ukubeka amenable ukuba zonke izingxenye: CPU, inkumbulo, ugesi amathayi nokunye okuningi.
imenyu BIOS ngokuphelele ngesiNgisi, kodwa into ngayinye has a incazelo enemininingwane, ngakho-ke, ukushona izinkinga ohlelweni umsebenzisi eziphambili uma kungavela. Yiba amazwana kuphela yinkimbinkimbi obusebenzayo yokuvula CPU cores. It is ukusebenza njengoba i algorithm ukuze abulawe ngokukhetha izilungiselelo ethize (ezichazwe manual samanje). Thanda kumnikazi "Sandbox" lapho ukulihlola uhlelo overclocked ngaphandle Iqalisa phansi computer.
On the ubuchwepheshe bamuva
Umbadlana, izici zazo ngesineke kwi isembozo elikhanyayo, kudinga ngokucacile isibuyekezo esinemininingwane umenzi kuncike ubuchwepheshe. Nokho, umnikazi ulinde isimanga lapha. Iningi izicelo ephezulu sephrofayela, ezifana 108 db, Blu-ray, 3TB, 3X-USB Amandla, Uyi ezivamile amacebo okuthengisa ongawacabanga. Eqinisweni - lena AMD AM3 + ejwayelekile evamile, okudinga zonke abakhiqizi ukunikeza umbadlana asekelayo imisebenzi abafanele: kukhawulwe umsindo 108 le db, ukusakaza Blu-ray, usekelo 3TB hard drive umthamo nokuqinisekisa owanele ukuze esibonakalayo se-USB.
Ngu ubuchwepheshe Ultra okuqinile 3 Classic ezifihlakele ukusetshenziswa PCB ne babashayeli yethusi ukufakwa capacitors okuqinile Japanese. Amandla 10 - Le ncazelo okuthuthukisiwe system amandla ngokuvumelana isikimu 8 + 2 izigaba. Beautiful wokugubha / OFF Charge akalutho kodwa uhlelo okusindisa ngesikhathi engenzi lutho (lwenteke ngokunciphisa inani ukuvama iprosesa, inkumbulo futhi ukubonisa adaptha njengoba laptops).
I yokuntula zedivayisi
Emzamweni ukwethula ubuchwepheshe obusha, abakhiqizi ngokuvamile senqabe ubudala, interface engadingeki (Ngokombono wabo). Futhi uma umbadlana, intengo eyeqa ophahleni ruble 20,000, ifakwe nezixhumi IDE, LPT futhi FDD (siqala uyazikhethela), ezimeni kwesabelomali ophucwa izimbobo ezidingekayo. Ukuze abasebenzisi eziningi, ukuntuleka IDE-isixhumi kubalulekile, njengoba iningi zisatholakala optical DVD-drive.
izinto Kancane kulula ne-port LPT, esetshenziswa ukuxhuma iphrinta. "Yiba umngane" ikhompyutha ne-printer, ungasebenzisa i-adaptha esikhethekile-USB, kodwa nayo yonke eminye esibonakalayo ngempela inkinga.
Olwenziwe phezu umbadlana igigabhaythi GA-990XA-UD3 Uhlolojikelele waphinda ikhombisa abathengi ezingaba, ukuthi ukufuna amakhambi kufanele uqale umdlalo ingxenye yesabelomali. Umsebenzi umdayisi asinika umthengi uhlelo eqolo (inzuzo yemali), futhi umthengi efuna ukuthola elinganiselayo ithuluzi engabizi (izindleko imali). Umenzi uzama ukujabulisa bonke abantu, ngoba noma kunjalo ihola imali ekuthengisweni.
Ngazi kanjani ukuthi ikhadi lami umsindo kukhompyutha yakho?
Umcwaningi ngephutha yasungulwa ngebhethri ingasebenza kukho konke ukuphila kwakho
Intel Celeron J1800 processor: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza
I-Xiaomi (imizila): ukulungiselelwa firmware. Ukubuyekezwa kwe amamodeli engcono kanye nokubuyekeza
Intel Atom Z2560: processor kakhulu ephezulu kumadivayisi eselula
Ukuthenga Ngo-Windows - lokhu akukona dumpster, futhi kwangigcina
Compote Delicious cherry iplamu kanye zucchini nge uphayinaphu flavour
Grain Weevil: incazelo kanjani ukuqeda
Yokweba - kuyini?
Iresiphi onemininingwane: "Nut ubisi olujiyile"
Amadolobha zomhlaba. megacities
Zoya Voskresenskaya. Biography futhi amaqiniso athakazelisayo zokuphila
Umqambi waseRussia uLeonid Desyatnikov: biography, impilo yomuntu siqu, ubuciko
Indlela Khulisa Izithombo Pepper
Ilokhi ekhonjiwe, noma i-Great Combinator